Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Desambra, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana · Desambra, 2009
Tantara mikasika ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana tamin'ny Desambra, 2009
Tonizia : hetsika naoty fotsy hanoherana ny sivana
Tonizia 31 Desambra 2009
Sary famantaran'ny Hetsika Naoty Fotsy Tamin'ny zoma 25 desambra no namoahan'ny mpamaham-bolongana Toniziana ny fanentanana Naoty Fotsy hanoherana ny sivana izay miitatra dia miitatra tokoa any Tonizia amin'izao fotoana izao. Tsy mifidy karazam-bohikala asiana intsony ny Sampan-draharahan'ny Aterineto Toniziana (ATI). Saiky nandray anjara tamin'ity fanentanana naoty fotsy ity avokoa ny...
Iran: Manohana ilay mpianatra voafonja ireo lehilahy any Hijab
Iràna 31 Desambra 2009
Lehilahy Iraniana anjatony no manao fitafim-behivavy any Hijab mba hanohanana an'i Majid Tavakoli, mpianatra voasambotra tamin'ny 7 Desabra. Misy video YouTube manangona sary sasany amin'ireo mombamomba ny tena [profile]ao amin'ny FaceBook.
Maneran-tany: “Mi-tweet” ho an'i #Gaza
Amerika Latina 31 Desambra 2009
Ho fahatsiarovana ny tsingerin-taona voalohan'ny fanafihan'ny Israely an'i Gaza tamin'ny Desambra 2008, mafana fo maro no nanomana ny fanentanana “tweet for Gaza” ao amin'ny Twitter. Manana betsaka amin'izany Jillian C. York
Iran: Rehefa ihoaran'ny hatezerana ny tahotra
Iràna 29 Desambra 2009
Niely nanerana an'i Teheran sy ireo tanandehibe ny mpanohitra Iraniana nihaika ny fitondrana Iraniana ny alahady teo, raha maro ny tangoron'olona hankalaza ny Ashura, fetim-pivavahana lehibe iray.
Ejipta 26 Desambra 2009
Sahara Andrefana: Voaroaka i Aminatou Haidar
Sahara Andrefana 21 Desambra 2009
Aminatou Haidar dia mafana fo lohalaharana amin'ny fitakiana ny fahaleovantenan'i Sahara Andrefana (avy any Maraoka). Ny Zoma 13 Novambra, raha niverina ho any Laayoune (tanàna iray any amin'ny faritr'i Sahara Andrefana), nosamborina izy ary noroahana noho izany. Manangona ny fanehoan-kevitra avy amin'ny mpitoraka blaogy rehetra i Jillian C..
Tonizia: Mpianatra nofonjàna noho ny tafatafa nifanaovana tamin'ny Media
Tonizia 17 Desambra 2009
Nanagana Vondrona Facebook iray sy blaogy iray ireo mafana fo Toniziana ho fanohanana an'i Mohamed Soudani, 24 taona, izay nanjavona ny 22 Oktobra 2009, tao Tonizia, taorian'ny nanaovany tafatafa ho an'ny Radio Monte Carlo International sy Radio France International. Ren'ireo tapaka sy namana avy eo fa nogadraina sy nampijaliana izy.
Maraoka:Mitohy ny ady atao amin'ny mpanao gazety
Maraoka 04 Desambra 2009
Manamafy ny fanenjehana ny mpanao gazety mahaleotena ny fanjakana Marokana. Ao anatin'ny herinandro iray dia tsy maintsy mahita tsy fanarahan-dalàna ny fanjakana, mba hanamelohana ny asa fanaovan-gazety, na ny an-tsoratra izany na amin'ny haino aman-jerin'ny aterineto. Niady hevitra momba izany fizotry ny raharaha izany ireo mpitoraka blaogy.